Hery - Tsiky dia ampy | Izaho sy ny ahy | 7
Ny hadisoan'i Dan
2012-03-05 @ 09:24 in Izaho sy ny ahy
(eritreritra mandalo) Misy tantara anakiray mahafinaritra izay ao amin'ny baiboly ao. Ny baiboly moa, ho an'izay mbola tsy mahay na mbola tsy nahita, dia boky lehibe iray misy lahatsoratra maro, izay eken'ny Kristianina (Mpanaraka an'i Kristy avy any Nazareta), ho Tenin'Andriamanitra. Misy tantara sy oha-pitenenana, hatramin'ny tononkira ao amin'izany baiboly izany. Koa misy tantara iray izay hitako mahafinaritra raha mahaliana anareo.
Tsy tokony ho eto no nametrahako ity lahatsoratra ity satria manana ny blaoginy izy. Fa nataoko ato ihany satria mahaliana ahy. Alarobian'ny lavenona rahampitso. Manomboka rahampitso ny fotoanan'ny karemy ho an'ny Katolika. Fotoana fampihavanana, fifandraisan-tanana sns. (tohiny)
She spent it with me
2012-02-13 @ 18:50 in Izaho sy ny ahy
Whitney Houston no mpihira vavy tiako indrindra. Ary mino aho fa betsaka ny toa ahy. Ny hira isan'ny tsaroako indrindra sy miverina ao a-bavako dia ilay hoe "My love is your love". Nohenoina en boucle fony tany tamin'ny 2001 tany ho any. Misy toa izao ny tonony rehefa adika tsotsotra amin'ny teny gasy. Tsy ny tonony manontolo no apetrako
Aok'izay ny tsy rariny
2012-01-19 @ 10:51 in Izaho sy ny ahy
Izaho dia anisan'ireo mandray anjara amin'ny hetsika "Aok'izay".
Nandritra ny taona mifandimby ny Malagasy dia tsy mba nahita fitsaharana mihitsy fa nohitsahin'ireo mpanao politika, na iza na iza. Mihitsoka tsy mety tafavoaka ao anaty lavaka ny Malagasy.
Koa izay no iantsoako hoe "Aok'izay"
Tsy maintsy hisy ny hiteny hoe araraotin'ny GTT sy Ravalo ny "Aok'izay", tsy olana izany. Hahazo ny "Aok'izay" koa izy rehefa tonga eo satria samy manana ny hadisoany.
Fa amin'izao aloha:
Aok'izay ny fampihorohoroana
Aok'izay ny fanenjehana
Aok'izay ny fisamborana
Aok'izay ny fanagadrana
Aok'izay ny fanampenam-bava
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 32 33 34 Manaraka»